Ethiopian Airlines Nampitombo ny zotra mankaty Madagasikara
Lalana Avarabohitra Itaosy Tena atao manara-penitra
Tena hatao manara-penitra ny asa fanamboarana ilay lalana eny Avarabohitra Itaosy mirefy 2 km mahery, hampiasain’ny solombavambahoakan’Atsimondrano ilay vola azon’ity distrika iray ity tamin’ny alalan’ny Comité Local de developpement (CLD).
Fahapotehan’ny lalana eny Itaosy Mampikaikaika ny olona
Mihapotika tsikelikely ny lalana mihazo an’Itaosy ankehitriny. Manomboka eny Anosimasina ka hatrany Andranonahoatra, mirefy 2 km sy 500 eo ho eo.
Ambendrana-Antsohihy Fiaran’ny zandary nahafaty olona
Tovovavy roa mpianatry ny oniversite katolika ASJA ao Antsohihy no nodomin’ny fiaran’ny zandarimariam-pirenena tao amin’ny fokontany Ambendrana ny alatsinainy 4 desambra lasa teo.
Lalana amboarina anaty fotoam-pahavaratra Asa kitoatoa, miteraka fahasahiranana hafa indray
Alasafay, hoy ireo mpitatitra sy mpampiasa lalana ity asa fanamboaran-dalana tanterahin’ny fitondram-panjakana amin’izao fotoam-pahavaratra izao ity.
Fitohanana etsy Anosizato Tara daholo vao tafody ny olona, vehivavy iray voaendaka
Miverina indray ny fitohanana etsy amin’ny rond point Anosizato hatramin’ny niavian’ny ranon’orana.
Anosipatrana “Digue” Nipotsaka ny lohan’ilay ramatoa
Vao niantomboka ny volana desambra dia nosantarin’ny ra mandrika sy faty olona ny teto Antananarivo sy ny manodidina. Loza tsy roa aman-tany no niseho teny Anosipatrana omaly zoma 1 desambra tokony ho tamin’ny 11 ora latsaka.
«Permis de conduire » sy « Carte grise » Biométrique Nitarina indray ny fe-potoana hanamboarana azy
Nahemotra amin’ny daty manaraka indray raha tokony hifarana amin’ny 31 desambra izao ny fe-potoana hahafahana mamadika ny karatra fampiasa teo aloha ho biometrika, araka ny fanambarana nataon’ny minisiteran’ny atitany omaly tetsy amin’ny Centre Immatriculateur Ambohidahy.
Efa hatramin’ny voalohan’ny taona no nanokatra zotram-piaramanidina eto amintsika ny Ethiopian Airlines, izay miainga eto Madagasikara mankany Addis Abeba.
Efa hatramin’ny voalohan’ny taona no nanokatra zotram-piaramanidina eto amintsika ny Ethiopian Airlines, izay miainga eto Madagasikara mankany Addis Abeba. In-telo isa-kerinandro no nisy io sidina io tany am-boalohany fa nanokatra andro iray fahefatra ahafahana misitraka izany zotra izany ny Ethiopian Airlines. Ho fanamarihana io andro voalohany hisokafan’ny zotra fahefatra ao anatin’ny herinandro io, dia hizara fanomezana ho an’ireo mpandeha mividy ny tapakila ho an’ny sidina amin’ny sabotsy 14 oktobra ho avy izao ny Ethiopian Airlines. Ireo izay tsara vintana dia hahazo “connexion” ao anaty fiaramanidina avy hatrany mandritra ny sidina. Hisy ihany koa ny loka be dia be hozaraina amin’ireo mividy tapakila tsara vintana ka fitaovana ao an-tokantrano maro samihafa toy ny “machine à laver, réfrigérateur, mixeur, climatiseur…” ireo fanomezana ireo. Azo atao ny miantso avy hatrany ny laharana 020 22 307 34 – 034 07 637 92, ahazoana fanampim-panazavana misimisy kokoa sy hamandrihana avy hatrany ny tapakila. Tsiahivina moa fa firenena maherin’ny 110, manerantany no hiasan’ny Ethiopian Airlines.